मतदाता धम्क्याउँदै दाहाल र राणा – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७९, शनिबार ०७:०३ May 7, 2022
चितवन र डडेलधुरा — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा राणाको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ । दाहालले छोरी रेनुले भरतपुरमा नजिते देश दुर्घटनामा पर्ने भन्दै मतदाता तर्साउन खोजेका थिए भने आरजुले आफ्नो दलले नजितेका पालिकामा बजेट नै नपठाउने धम्की दिएकी थिइन् ।
डडेलधुरा कांग्रेसका पूर्वसभापति कर्णबहादुर मल्ललगायतको समूहले एमालेसँग तालमेल गरी तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र दुई स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा उम्मेदवार खडा गरेको छ । कान्तिपुरबाट
हेलम्बुमा कांग्रेसले जितेपछि पर्यटनको क्षेत्रमा के-के भयो ? हेर्नुहोस् १० बुँदामा !
आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ : डा.उप्रेती